Information for Myanmar about Islam: ကုရ်အာန်တွင်ဆိုသော ရှင်ဂေါတမအကြောင်း
အစ္စလာမ်ဘာသာ ပေါ်ထွန်းလာမှာကို ဗုဒ္ဓက နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော် လောက်ကတည်းက ကြိုတင် ဟော ကိန်းထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်စောင်ကိုတွေ့တာနှင့် မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိလို မျှဝေရာမှာ ကုရ်အန်ထဲ မှာ ဗုဒ္ဓနှင့် ပတ်သက်၍ ဖေါ်ပြထားတာရှိတယ်လို့ ရေးလိုက်ပါတယ်။ ရေးလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ဗုဒ္ဓ ဘာသာလူများစုတွေ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာမွတ်စလင်တွေအနေနှင့် ဗုဒ္ဓနှင့် အစ္စလာမ် ဆက်စပ်မှုကို ကြားသိထားသည့်အတိုင်း ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးနွယ်တိုင်းကို အလ္လာဟ်အရှင်က တမန်တော်များ စေလွှတ်ခဲ့သည်ဟု ကုရ်အန်က ဆိုသည်ဟုလည်း ကြားနာဖူးပါတယ်။ ဗုဒ္ဓကို ကုရ်အန်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်နှင့် ပတ်သက်၍လေးစားအပ်သောမိတ်ဆွေကြီးနှစ်ဦးကမေးခွန်းထုတ်လာပါတယ်။
ကျနော်သိသလောက်က ဘာသာအသီးသီးမှာ အယူအမြင် ကွဲပြားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအယူ အမြင်ကွဲပြားမှု အပေါ် အခြေခံပြီး ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူ၊ ဂျူး စသည်တို့မှာ အစ္စလာမ်လိုဘဲ ဂိုဏ်းကွဲများ (Schools) ဖြစ်တည်လျက် ရှိပါတယ်။ တစ်ဂိုဏ်းထဲမှာပင် ဒေသအလိုက် ကွဲပြားမှုတွေ ရှိတတ်ပြန်ပါတယ်။
အခုကျနော် ဖေါ်ပြပေးမည့် အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အစ္စလာမ် ဘာသာရေး ပညာရှင်များတွင် အမြင်မတူညီမှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျနော့အနေနှင့် တွေ့ရှိရခြင်းကို ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါ တယ်။ လေ့လာထားတာ ဟုတ္တိပတ္တိမရှိ၍ လေ့လာထားတာကို တင်ပြခြင်း အလျဉ်း မဟုတ်ပါ။ ဘယ်လောက် မှန်တယ်။ မမှန်ဘူး။ ခိုင်မာတယ်။ မခိုင်မာဘူးဆိုတာကို အသေးစိတ် ပိုမိုသိရှိလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် သာသနာ့ ပညာရှင်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်။ မိမိ သိရှိထားသည်များ ရှိပါကလည်း ဖတ်ရှုလိုပါ တယ်။
ဆရာ ဦးမောင်ကို ဂဖာရီ၏ Al-Nahdahပါ ဆောင်းပါးကို (မူလ မိတ္တူက အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေပြီး ဖတ်ရန် ခက်ခဲနေသဖြင့်) ကူးယူဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းသော မိတ်ဆွေများ အလွယ်သိရှိနိုင်ရန် အဓိကကျသောအချက်အလက်အချို့ကိုမြန်မာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(Allama Yusuf Ali အပါအဝင်) ထင်ရှားကျော်ကြားသော အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်များက ဂေါတမဗုဒ္ဓကို Surah Ambiya (21:85-86)နှင့် Surah Sad (38:48)ပါ Zul-Kifl, Man of Kappila (ဇွလ်ကိဖ်လ်, ကပ္ပိလမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး)အဖြစ် သတ်မှတ် ဖေါ်ပြကြပါတယ်။ Maulana Manazir Ahsan Gilaniက Sabe-inသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ Maulvi Abdul Haq Vidhyarthi နှင့် အခြားသြဇာကြီးမား သော အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်အများအပြားက ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားခဲ့သော နောက်ပွင့်တော်မူမည့် Ari-Metteya ဘုရား(မိမိ၏ ရန်သူကိုပင် မေတ္တာတရား ကြီးမားစွာ ထားနိုင်သောသူ) ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံး တမန်တော်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုကြသည်။
အချို့ပညာရှင်များက Surah At-Tin(95)ကို သဖန်းပင်ဟု ပြန်ဆိုရာတွင် ဗုဒ္ဓနှင့် အခြားသူတော်စင်များ တရား အားထုတ်သောဗောဓိညောင်ပင်ကိုလည်းဆိုလိုနိုင်ကြောင်းဖွင့်ဆိုကြသေးသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၀
Copy from: http://myanmarmuslimhands4u.blogspot.com/2011/04/blog-post_4370.html
Posted by A Muslim at 12:24 AM
သိကြားမင်း November 16, 2012 at 12:27 AM
အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်အများအပြားက ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားခဲ့သော နောက်ပွင့်တော်မူမည့် Ari-Metteya ဘုရား(မိမိ၏ ရန်သူကိုပင် မေတ္တာတရား ကြီးမားစွာ ထားနိုင်သောသူ) ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံး တမန်တော်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုကြသည်။
ပထမ ဗုဒ္ဓဘုရား သာသနာကွယ်မှသာလျှင် နောက်ဘုရား ပွင့်ရိုး ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓ တစ်ဆူနှင့် တစ်ဆူ နီးကပ်စွာ ပွင့်လေ့ မရှိပါ။ ( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်သော ဘုရားကိုသာ ဆိုလိုသည်။ ထိုကြောင့် မိုဟာမက် သည် အရိမ္တေယျ ဗုဒ္ဓ မဟုတ်ပါ။)
ဗုဒ်ဓ သာသနာဟာ တစ်ခုတည်းသော အနတ်တ၀ါဒ ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးပေါ် အစ်စလမ် ဘာသာဟာ ဂျူးဘာသာ ကို ဆက်ခံရင် ကျေးဇူးသိရာရောက်မယ် (ကမ်ဘာဦး မှာဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဂျူးဘာသာ(အိသရေလလူမျိုး)ကနေ ခရစ်ယန်ဘာသာ နဲ့ အစ်စလမ်ဘာသာ ဟူပြီးကွဲသွားတယ် ဒါငြင်းမရတဲ့သမိုင်းပဲ ဒါကြောင် ယေဟောဝါနဲ့အလ်လလ်ဟာ အမည်ကွဲသာဖြစ်တယ်) ဗုဒ်ဓ ဆိုပြီး ထာဝရ ဘုရားစိတ်ညိုငြင်အောင်မလုပ်ပါနဲ့
မင်းနိင် April 29, 2015 at 11:27 PM
KoEkoE June 15, 2013 at 3:42 AM
ဒီ Blog ဟာ အဆင့်အတန်းရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ် ... သိုပေမယ့် ... တဖက်သတ် မေးခွန်းတွေမေး
ကိုယ့ဟာကိုယ်တွေဖြေပြီး အရိုင်းဆန်တယ် ကိုယ့်ဘက်အမြင်တွေပဲရေးနေတယ် ...
တိုက်ခိုက်သလိုလို ဆွေးနွေးသလိုလိုဆန်တယ် ။ တိုက်လဲ မလှုပ်ပါဘူး ဆဲလဲ မတုန်ပါဘူး ဘယ်ဟာ မှားနေတယ်ထင်လဲ မေးပါ ပြောပါ Open Forum တင်လိုက်ပါ ဒါဆို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမယ် ။
ကိုယ့်ဘက်ကလဲ အပိတ် သူ့ ဘက် ကလဲ အပိတ်ဆို ဆက်စရာမရှိပါဘူး ။
Khun Naung Hein August 16, 2013 at 3:06 AM
အဟဟဟ . ထင်ရှားကျော်ကြားသော နဲ့ သြဇာကြီးမားသော .အစ္စလာမ် သာသနာ့ ပညာရှင်တွေရယ် ..
ညံ့ချက်က ကမ်းကုန်.. အရိမေတ္တေယျ ဘုရားက တမန်တော်မိုဟာမက်ကို ရည်ညွန်းတယ်ဆို .
တမန်တော်မိုဟာမက်က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ နောက်မှပေါ်တဲ့ တမန်တော်ပေါ့ .
( ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟောခဲ့တာအမှန်ဆိုရင် တမန်တော် မိုဟာမက်က သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားလို့ ဘာကြောင့်မပြောပဲ
တမန်တော်လို့ပြောရပါသလဲ ) ပို့စ်တင်ချင်ရင် အမှန်အမှားခွဲခြားပီးတင်ပါ ..
ဖွင့်ဆိုတယ်ဆိုတာက ဖွင့်ဆိုတဲ့သူရဲ့သဘောထားပါ အမှန်တွေပါမပြောနိုင်သလို အမှားတွေပါလို့လဲမပြောနိုင်ပါဘူး.. ဥာဏ်သုံးပီးစဉ်းစားပါ
˜º̶̶ƷʌuτuмиƸ̶º˜˜ August 19, 2013 at 7:32 PM
((((Allama Yusuf Ali အပါအဝင်) ထင်ရှားကျော်ကြားသော အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်များက ဂေါတမဗုဒ္ဓကို Surah Ambiya (21:85-86)နှင့် Surah Sad (38:48)ပါ Zul-Kifl, Man of Kappila (ဇွလ်ကိဖ်လ်, ကပ္ပိလမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး)အဖြစ် သတ်မှတ် ဖေါ်ပြကြပါတယ်။ Maulana Manazir Ahsan Gilaniက Sabe-inသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ Maulvi Abdul Haq Vidhyarthi နှင့် အခြားသြဇာကြီးမား သော အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်အများအပြားက ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားခဲ့သော နောက်ပွင့်တော်မူမည့် Ari-Metteya ဘုရား(မိမိ၏ ရန်သူကိုပင် မေတ္တာတရား ကြီးမားစွာ ထားနိုင်သောသူ) ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံး တမန်တော်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း သာဖြစ်ကြောင်းရှင်း လင်းဖွင့်ဆိုကြသည်။)))
ကျုပ်တို့သာသနာတော်မှာ အရိမတ္တေယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော် မူမယ်လို့ပဲ ဟောထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေကွယ်…. အရိမတ္တေယျမြတ်စွာ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံပေါ်ပေါက်တော်မူမယ်ဆိုတာက အစ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီး မည်သည့် ဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံ မယ်ဆိုတာပါ အတိအကျပါပါသကွယ်….. အရိမတ္တေယျမြတ် စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ သူ့ကိုယ်သူခေါင်းဖြတ်ပြီးပေးလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တော်ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ အထက်မှာ တိုင်လေးခုပါတဲ့ ရတနာကျောင်းတော် သဏ္ဍန်အမိုးထီးတော်ဟာ အမြဲတစ္ဆေလိုက် ပါပြီး နေရောင်မခ မိုးပေါက်မကျရအောင် လိုက်ပါနေမယ်…. အရိမတ္တေယျဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ် ကြီးကြွ ချီတော်မူတဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းမှာလည်း ပဒုမ္မာကြာပွင့်တွေဟာ မြေပြင်မှသူ့အလိုလိုပေါ် ထွက်ပြီး ခြေတော်အစုံကို ခံယူတော်မူမယ်လို့ ဟောထားခဲ့တယ်… ကဲ ဘယ်မှာလဲ မိုဟာမက်မှာ အဲဒီလိုအချက်အ လက်ထူးတွေ…. ဟားဟားဟား အလိုလိုရတနာကျောင်းတော် လိုက်မိုးပေး ဖို့နေနေ သာသာ အမြဲတမ်းထီးလိုက်မိုးပေးမဲ့သူတောင်ရှိလို့လား….. ဘုရားရှင်တို့မည်သည် ကိလေသာဟူ၍ ဝါသနာနှင့်တကွအကြွင်းမဲ့ပယ်သတ်တော်မူပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို အဲဒီလို မယားပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် နဲ့လူက တို့ဘုရားဖြစ်ချင်သေး သလားကွယ်… . ဖြစ်ချင်သပ ဆိုရင်တော့ တို့သာသနာထဲဝင် ဘုရားရှင်ကိုဖူးတွေ့နိုင်အောင်အရင်ကြိုးစား… ပြီးမှ ဘုရားဆုသာ ပန်ပေရော့….. အဲ…. အဲလိုမျိုးဆိုရင်တော့လည်း ဒီလိုဘာသာတစ်ခု ထူထောင်ဖြစ်မှာတောင် မဟုတ်လောက် ပါဘူးလေ… အတင်းရော ဇွတ်ရော အဓမ္မရောကို ဆွဲတူနေတော့တာပဲ… တို့မြတ်စွာဘုရား ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး အနှိုင်းမဲ့လောကသစ္စာတရားတော်ဖြစ်တဲ့ အနတ္တဝါဒ ကို ဟောကြားဖြန့်ဝေတော် မူတယ်… ထာဝရဆိုလို့ နိဗ္ဗာန်ကိုတောင် မသုံးနှုံးဘူး… နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အငြိမ်းဓါတ်သက်သက် သာလျှင်ဖြစ် တယ်…. အဲဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ထာဝရတည်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ တမန်တော်ဖြစ်ပါဦးမလား…. အဲဒီလိုကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖန်ဆင်းရှင်ပါလို့ လေကြီးနေတဲ့ သတ္တဝါ သာ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံကြိုက်လိုက်ရရင် သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တာ၊ သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာဆိုတာတွေကို မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ဟောကြားတော်မူလိုက်လို့ သဘောပေါက်နားလည်ပြီး မှားပါပြီလို့ ဝန်ချတောင်းပန်သွားမှာသေချာတယ်…. ဘုရားရှင်လက် ထက်တော် ကလည်း ပကဗြဟ္မာကြီးဟာ သူ့ကိုယ်သူဘုံစဉ်တွေလျှောကျနေမှန်းမသိဘဲနဲ့ မြဲလှပြီထင်ပြီး သူကတော့ ထာဝရပါလို့ အခုလိုပဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဘာမသိညာမသိရမ်းဖြီးခဲ့သေးတာပဲလေ…. အတုမဲ့ပရမေ အစစ်ဖြစ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ တွေ့တော့ သူလည်း အရှုံးပေးရပြီး အမှားကိုဝန်ခံ ရတော့တာပဲ မဟုတ်လား….. အခုလည်း ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကြီး အဲဒီဘဝရောက် သွားပါဦးမယ်ဗျာ…. စွတ်ပြီးတော့ အရမ်းကာရောကို မတူချင်စမ်းပါနဲ့….
Loveof Enegry July 9, 2014 at 10:54 PM
ကြိုက်သွားပြီ ပါဠိလိုများ၂မရေးပါနဲ့ အနက်များ၂းရေးပါ တောင်းပန်အပ်ပါသည် ဒါမှသူတို့ အမှားအမှန်သုံးသပ်လို့ရမှာ
˜º̶̶ƷʌuτuмиƸ̶º˜˜ August 19, 2013 at 7:35 PM
((((((Allama Yusuf Ali အပါအဝင်) ထင်ရှားကျော်ကြားသော အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်များက ဂေါတမဗုဒ္ဓကို Surah Ambiya (21:85-86)နှင့် Surah Sad (38:48)ပါ Zul-Kifl, Man of Kappila (ဇွလ်ကိဖ်လ်, ကပ္ပိလမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး)အဖြစ် သတ်မှတ် ဖေါ်ပြကြပါတယ်။ Maulana Manazir Ahsan Gilaniက Sabe-inသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ Maulvi Abdul Haq Vidhyarthi နှင့် အခြားသြဇာကြီးမား သော အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်အများအပြားက ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားခဲ့သော နောက်ပွင့်တော်မူမည့် Ari-Metteya ဘုရား(မိမိ၏ ရန်သူကိုပင် မေတ္တာတရား ကြီးမားစွာ ထားနိုင်သောသူ) ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံး တမန်တော်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုကြသည်။))))))
ကိုအောင်တင်ရေ..ရှင်တင်တဲ့ပိုစ့်မှာတောင်.... လေးလုံးမကွဲဖူးနော်... ဂေါတမဘုရားရှင် လိုလို အရိမေတ္တယျ ဘုရာရှင်လိုလို.... ဘာအကြောင်းကိုလိမ်ချင်တာလဲရှင်....
ကဲ Surah Ambiya (21:85-86) ကိုအရင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ရှင် နော်
သေချာလဲပြန်ဖတ်ကြပါအုန်းရှင်.... ရှင်တို့ရဲ့ ( Surah Al.Ambiya (21:85-86)) မှာ....ဘာရေးထားသလဲ ဆိုတာလေ ...ဘာလို့ညှိမရတာကို မတူတူအောင် လိုက်ညှိနေတာလဲရှင် ... အဲ့မှာပြောထားတာက
Isma'il , Idris နဲ့ Dhul-Kifl တို့၃ယောက်ဟာ... မေတ္တာတရားထားနိုင်သောသူမို့လို့ အလာဟ်က ရွေးချယ်သောသူပါတဲ့ရှင်.... ကဲပြစမ်းပါအုန်းရှင်..ဘယ်နားးး မှာ ကပ္ပိလ၀တ်ရဲ့ လူဆိုတာ ရှိလဲလို့လေ.....
ပြီးတော့နောက်တခု Surah Sad 38;48 ကိုကြည့်ရအောင်ပါ.....
(Surah Sad 38;48 ) ( Y.Ali) commemorate Isma'il , Elisha and Zulkifl; Each of them was of the company of the good.
38.48: (picktall) And made mention of Isma'il , Elisha and Zulkifl; All are of the chosen.
သူပြောထားတာက.... Isma'il , Elisha and Zulkifl; တို့က မေတ္တာတရားထားနိုင်သူမို့ ...သူတို့ သည်အလာဟ်လွတ်တဲ့သူတွေကျိန်းသေဖြစ်ရမည်တဲ့.... အလာဟ်မှာလွဲလို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့..။
ရှင်ပြတဲ့ကျမ်း၂ခုလုံးမှာ.... မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်တာ...ဘာမှ..မဘာမှ ယုံတင်မကပါဖူး.... ကျမ်း၂ခုညွန်တာ အဲ့ကျမ်း ၂ခုက လူနာမည်တောင်.... အပေါ်တမျိုးအောက်တမျိုးလွဲနေသေးတာပါလား...။ ကိုယ့်ကျမ်းလဲ ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါအုန်းရှင်... လုံးလားပြားလားဆိုတာ... အလည်ကလူနာမည်က အီလီးရှာ ဖြစ်လိုက် အစ်ဒရစ် ဖြစ်လိုက်.... တစ်ကယ်ပါပဲ...ကျိန်းသေတာကတော့... ကျမ်းရဲ့အကျယ်မှာရော..အကျဉ်းမှာ ပါ မြတ်ဗုဒ္ဓအကြောင်းမပါပါရှင်... အင်ဒီးယားနဲ့ဆင်တာဆိုလို့..မူဂျာဟစ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အကြောင်းပဲ ပါတာပါ... သေချာပြန်ဖတ်အုန်းရှင်... ကိုယ်ကျမ်းစာကိုကိုယ်... သူများတွေကလိုက်ရှင်းပြနေရရင် မဟုတ်သေးဖူးနော်....
နောက်တစ်ခု.... ဦးဌေးလွင်ဦးရေးခဲ့တဲ့... ကိုယ်တော်မူဆာသည် ဂေါဏဂုဏ်ဘုရားလား
ဆိုတဲ့ပိုစ့်မှာ ရောဒီပိုစ့်မှာပါ ပါတဲ့ ဌေးလွင်ဦးးက ရေသဖန်းပင်ပြောပြီး ကိုအောင် တင်က ဗောဓိပင် လို့ ပြောတဲ့ At.Tin ( 95 ) ဆိုတဲ့ အပင်ကိုပြောပါရစေရှင်....ဒီအပင်ကို.. ဒီအာရာဗ် နိုင် ငံတွေ မှာ... အက် တိင်းန်.... လို့ခေါ်ပြီး.... ဒီအပင်ရဲ့ အသီးကိုကျတော့ တိင်းန် ( TINN) လို့ခေါ်ကြပါ တယ်... အခုလိုနွေရာသီတွေမှာ... အရမ်းပေါပါတယ်... ယောက်ျားတွေ အတွက် ဟိုမုန်းအားကောင်းစေတယ်... အပူစင်တယ်လို့ပြောပါတယ်.. တမန်တော် အကြိုက်ဆုံး အသီးပေါ့... ယောက်ျားလေးတွေ အရမ်းစားကြ ပါတယ်... ဦးဌေးလွင်ဦး လိမ်တဲ့ ရေသဖန်းလဲ မဟုတ်သလို ဦးအောင်တင် ရမ်းပြောတဲ့ ဗောဓိ ပင်လဲမဟုတ် ပါဖူးရှင်.... သဲကန္တာရ တဇောင်းပင် နဲ့တဇောင်းသီးပါ.. ဓါတ်ပုံပါတင်ထားပါတယ်.. ဆိုဒ်ထဲမှာသွားကြည့်ပါရှင် http://moenatvilla.blogspot.com/2013/08/blog-post_19.html
mgmyo min February 11, 2014 at 9:23 AM
Loveof Enegry July 9, 2014 at 10:58 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ သေချာရေရာပြီးတိကျရှင်းလှပါ ရောရမ်းမှန်းသုတ်မဟုပ်ပါဘူး အရေးသားတိကျလှပါသည်
linlatt aung April 21, 2015 at 5:12 PM
ခင်ဗျား တို့ အဲ့ လို သူဘာသာ ကိုယ့် ဘာသာ အပြန် အလှန်ပုတ် ခက် ပြီး ငြင်းနေ မယ့် အစား
ဘုရား ဟော တဲ့ ဝိပသနာ ကို အားထုတ် ကြ ပါ လား
ဘယ် ဟာ အမှန် ဘယ် ဟာ အမှား ဆို တာ ဘယ် သူ မှ သေ ချာ မသိ ဘူး
ငါ တ ကော ကော ပီး ငါ့ ဟာ မှ အမှန် လို့ အတ္တ ကြီး မ နေ ကြ စမ်း ပါ နဲ့
shanmaung February 15, 2014 at 4:57 AM
shanmaung February 15, 2014 at 5:00 AM
aung pyae sone February 21, 2014 at 6:35 PM
mahinda monk April 29, 2014 at 8:53 AM
aww May 23, 2014 at 9:14 PM
မင်းဘုရာရှိလို့ လား ခွေးတွေ မင်းတို့ ကရုပ်ထုကြိးကိုဘုရားဆိုပြိးကိုးကွယ် အဟုတ်ကြိးမှတ်နေလား ဘုရားဆိုတာ အစ္စလာမ်နိုင်ငံမှာ ပွင့်တာ မသိရင်မှတ်ထား
aww May 23, 2014 at 9:23 PM
အလ္လာဖင်ကိုနောက်မှ ဝတ်ဆီတုတ်ကွ အခုမင်းအမေဖင်မှာ ငါသုပ်ရည် တုတ်ပေးစမ်း shan mung ရမယ်ဟုတ်လား
Kyawzin Lin May 29, 2014 at 8:01 PM
Mile Mile October 24, 2014 at 7:40 PM
Mile Mile October 24, 2014 at 7:43 PM
linlatt aung April 21, 2015 at 5:22 PM
အဒိ ပေ့ ထဲ မှာ အပြန် အလှန် ကိုက် နေ တဲ့
အစ္စလာမ် ဘာ သာ ဝင် ကော ပြော လိုက် မယ်
သူ များ ဘာသာ ရေး ကို ပုတ် ခက် စော်ကား နေ မယ့်
က်ုယ့်ဘာသာ ရေး ကို ဘဲ အာ ရုံ စိုက် ပါ
ကိုယ် ကြိုက် တာ ကိုယ် ကိုးကွယ်
ဘာ မှ စောက် ဇယား ရှုပ် စရာ မလိုဘူး
အလကား ဟာ တွေ
ဗုဒ္ဓ အဲ့ လ်ု ငြင်း ခုံ နေ ဖို့ ခဲ့ လား ချီးဘရိနါး တွေ
လွက် မြောက် ရာ ကို ကွ က်ုယ် ရှာ ဖွေ ကျင့် ကြံ အား ထုတ်
ခွေး တွေ လို ကြ တော့ က်ုက် တတ် တယ်
Htet Wai Yen Phyo May 7, 2015 at 8:27 PM
အစ္စလာမ်​ဘာသာဟာစစ်​မှန်​တဲ့ဘာသာဆိုရင်​open to open ထားသင့်​ပါတယ်